Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.6 Advice
Haddii aad u qabanaynaa naftaada ama la Wadaage shaqeeya, waxaan jeclaan lahaa in ay bixiyaan laba xabbadood oo talo in aan helay gaar ahaan waxtar leh ee aan shaqo u gaar ah. First, qabaa sida ugu badan ee suurtogalka ah ka hor wixii xog ah ayaa la soo ururiyay. talo Tani waxay u muuqataa wax iska cad in cilmi caadaysteen in ay ordaya tijaabo, laakiin waa mid aad muhiim u ah cilmi caadaysteen in ay la ilaha xogta weyn ka shaqeeya (eeg Cutubka 2aad). Iyada oo ilaha xogta weyn ugu shaqada dhacaya ka dib marka aad haysaa xogta, laakiin tijaabo yihiin soo horjeeda, inta badan shaqada dhici waa in ka hor inta aadan u ururiyaan xogta. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad naftaada ku qasbi si taxadar leh uga fikirtid aad design iyo falanqaynta waa in la abuuro iyo diiwaan qorshe falanqayn aad u tijaabiyaan. Nasiib wanaag, qaar badan oo fiican-dhaqanka for falanqaynta xogta tijaabo ayaa la rasmi galay tilmaamaha warbixinta, iyo tilmaamahan waa meel fiican si ay u bilaabaan marka la samaynayo qorshaha falanqaynta aad (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) .
piece labaad ee talo waa inaan ninna tijaabo waxa ay noqon doontaa kaamil ah, iyo sababta oo ah in, waa in aad isku daydo inaad qorshayso taxane ah oo tijaabo in kasta oo kale oo la xoojiyo. Waxaan xitaa maqlay this tilmaamay istaraatijiyad Armada ah; halkii ay isku dayayaan in ay dhisaan hal markab dagaal weyn, waxaa laga yaabaa inaad u riteen dhismaha fiican ee maraakiibta yar yar leh awooda dhammaystir ah. noocaas ah waxbarashada multi-tijaabo yihiin caadiga ah ee cilmi nafsiga, laakiin ay yihiin dhif meelo kale. Nasiib wanaag, kharashka yar ee qaar ka mid ah tijaabo digital ka dhigaysa, kuwaas oo noocee ah multi-tijaabiyaan maaddada fudud.
Sidoo kale, waxaan jeclaan lahaa in ay bixiyaan laba xabbadood oo talo kuwa yar hadda, laakiin si gaar ah muhiim u ah la dhigaayo tijaabo da'da digital: abuuro eber xogta qiimaha yarna iyo in la dhiso anshaxa galay aad design.